Somalida ku dhaqan South Afrika oo si weyn u xustey munaasabada 1-da Luulyo (Sawiro) – SBC
Somalida ku dhaqan South Afrika oo si weyn u xustey munaasabada 1-da Luulyo (Sawiro)
Xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhacday hool weyn oo ku yaalo magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Africa taas oo lagu xusayo sanad guuradii 51-aad ee ka soo wareegtay xornimadii Soomaaliya, isla markaana ah isku biiritaankii labada gobol ee waqooyi iyo koonfurta.
Xafladan oo ay ka soo qeyb kaleen dadweyne badan oo ku sugan hareeraha Cape town ayaa waxaa soo abaabulay qabashadeeda qaar ka mid ah horjoogayaasha jaaliyada Soomaaliyeed ganacsato ku sugan magaalada Cape town, iyo ururada dhalinyarada ee ku sugan magaalada.
Xaflada ayaa sidoo kale waxaa lagu casuumay qaar ka mid ururka haya talada dalka Koonfur Africa oo lagu magacaabo African national congress(ANC) oo xubnohoodii ay halkaa hadal ka jeediyeen isla markaana ay ku dheeraadeen xushmeynta dadka Soomaaliyeed ee ku sugan dalka koonfur africa.
Sidoo kale waxaa haldal ka jeediyay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee gobolka Western |Cape Cabdi Jiidow oo ku nuux nuux saday muhimda ay leedahay maalintan iyo waliba wadaniyada.
waxa uu sidoo kale Jiidoow aad ugu qoto dheeraaday xurnimadii Soomaaliya oo wax badan ka xusay, waxa uu sheekay in dad badani ay god u soo kaleen jiritaanka dalka iyo dadka isla markaana aysan macquul eheyn in maanta la dayoco.
waxaa markaa ka dib hadalo badan halkaa ka jeediya mas’uuliyiin fara badan oo uu ka mid yahay ganacsade yuusuf kooyn oo halkaa ka jeediyay hadal qiiro kaliyay dadkii qudbada dhageysanay.
Waxaa ugu danbeyntii ka hadlay gudoomiyay ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan dalka Koonfur Afrika Maxamed Muuse Nuur (Deeq Darajo) oo aad u guubaabiyay dhalinyarada isla markaana ku dheeraaday doorka ay dhalinyarada ku leeyihiin nabado, waxaana uu sheekay in dhalinyarada ay ka tusaala qaataan dhalinyadii gobanima doonkii SYL.